Silly Fools's Page - Myanmar Network
Silly Fools's Likes
Silly Fools's Friends
Silly Fools has not received any gifts yet
Silly Fools's Page
At 19:04 on August 5, 2012, Hla April Khin said…
အစ်ကိုရေ..ဘာလိုလိုနဲ့ (၂)နှစ်တော့ရှိပြီ ...(၃)နှစ်လောက်ပြန်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အစ်ကို့  ကို သွားသတိရလို့....ဒီအတိုင်းဆို ညီမလည်း သောင်တယ်တော့မယ် ထင်တယ်...နောက်တစ်နေရာတော့ ပြောင်းဖြစ်ပေမယ့်...home sick ဖြစ်တုန်းပါပဲ...ever ပြန်ချင်တယ်.
At 14:52 on December 3, 2010, Moe Wai said…
မိုးလည်း အွန်လိုင်း မတက်ဖြစ်တာ ခြောက်လလောက် ကြာသွားတယ်။ အခုမှ accept လုပ်ဖြစ်တာ ခွင့်လွတ်ပါနော်။
At 13:58 on April 12, 2010, hsu hsu khin said…
At 8:50 on April 11, 2010, Peaceangel said…
It'sapleasure to meet you. Happy Myanmar New Year! May you be healthy and wealthy start from this new year!
At 7:37 on April 11, 2010, Hla April Khin said…
ညီမ ကျောင်းပြီးရင် ပြန်မယ်..မပြီးခင်လည်း..ပြန်ချင်စိတ်တအားဖြစ်လာရင် ပြန်မယ်..
ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ မပြောတတ်သေးပါဘူး အစ်ကိုရယ်...ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတော့..နောက်တစ်ခါ အိမ်နဲ့ လုံးဝ မခွဲဘူးဆိုတဲ့ ဆန္ဒပဲ ရှိတယ်..
ကံပေါ့လေ..တစ်ချို့ပြောသလို ကိုယ့်ကံတင် မဟုတ်ဘူး ..တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံ ပါ ထည့်တွက် ဆိုသလိုပေါ့..:P I guess you are alumni, right?
At 22:32 on April 10, 2010, Hla April Khin said…
Sure Sure . Of course. Yes, this is very beautiful city. We can see the mountain at the same time ocean....But for me, I prefer my home country. I hate the weather. Pretty cold.
At 22:24 on April 10, 2010, Hla April Khin said…
ကောင်းတယ် brother. သိချင်တာ မေးရအောင် ညီမလည်း သိပ်တော့ မသိလှဘူး အစ်ကို ရ..ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် မေးပေးမယ် လေ..ACT ကတော့ ဖုန်းမရှိဘူး..အေးချမ်းသာ ပရဟိတကျောင်း တိုက်ကြီးနားရောက်ခါနီးပဲ..ယောက်ျားလေး (၇၀) လောက် ရှိတယ် ၂ နှစ်ကနေ..တက္ကသိုလ် တက်တဲ့အထိ. ..တာဂွကျေးရွာမှာ..ရန်ကုန်က နေ ကား ၁နာရီခွဲ တိတိကြာတယ်..ဓါတ်ပုံတော့ရှိတယ်....ကျောင်းကို ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်မယ့်ပုံရွေးပြီး နောက်နေ့တင်ထားလိုက်မယ် အစ်ကို
At 19:50 on April 10, 2010, Hla April Khin said…
At 19:49 on April 10, 2010, Hla April Khin said…
ဒါနဲ့ အစ်ကို မွေးနေ့က April ထဲမှာပဲလား..
At 19:48 on April 10, 2010, Hla April Khin said…
အဲလိုတော့ မဟုတ်ဘူးအစ်ကို ရ..unicef ကိုသွားစရာ မလိုဘူး..အဲဒါ unicef လက်အောက်မဟုတ်ဘူး အစ်ကို...လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေး လက်အောက်က...ငှက်အော်စမ်းမှာ..ဒလကနေ ကူးသွားရတယ်..ကွန်းခြံကုန်း နည်းနည်း ကျော်ကျော်မှာ ..တော်တော် တော့ ကားလမ်းကနေ အထဲကို ၀င်ရတယ်..ကျောင်းဖုန်းနံပါတ် ရှာပြီး ပြန်ပြောပေးမယ် အစ်ကို..အဲဒီမှာ က ကလေးပေါင်း ..၄၀၀ ကျော်တယ်..အစိုးရက တစ်နေကုန် မနက်စာ နေ့ခင်းစာ ညစာ အတွက် တစ်ရက် ကို ၂၀၀ကျပ်ပေးတယ်..သူတို့က အဲဒီမှာ သီးနှံလေး ဘာလေးစိုက်ပြီး လိုတာ ကို ကြည့်လုပ်ကြတယ်တဲ့..စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းပါတယ်....အစ်ကိုသွားချင်ရင်..တိုက်ကြီးမှာ လည်း မိဘမဲ့ဂေဟာတစ်ခုရှိတယ် ..ACT တဲ့..သိလားတော့ မသိဘူး..ညီမတို့တော့ အဲဒီကို ပိုသွားဖြစ်တယ်..သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေလို့..